Izikhulumi zixoxa nezihambeli zezingxoxo ngomuthetho omusha wase UKZN wokufunda ngesiZulu bonke abafundi abenza amazinga aphansi eNyuvesi kusukela ngonyaka ozayo.
Uhlelo olubizwa nge Open Mindz olwaqalwa abafundi ukuze bagqugquzele izingxoxo, babambe umcimbi wokukhuthaza izingxoxo ngesimemezelo sase UKZN sokufunda ngesiZulu bonke abafundi abenza amazinga aphansi eNyuvesi kusukela ngonyaka ozayo.
Loluhlelo lwethulwe bukhoma kuzigidi zabalaleli baseNingizimu Afrika bomsakazo UKhozi FM ohlelweni olushayelwa uBongani Mavuso ntambama phakathi kwehora lesithupha kuya kwelesikhombisa.
Izikhulumi ebezethulwa uMnu Lukhona Mnguni bekuyiDean yehhovisi le Teaching and Learning eKolishini lakwa Humanities, uSolwazi Nobuhle Hlongwa; uMphathi wakwa Arts Development ngaphansi koMyango wezobuCiko namaSiko ekwaZulu Natali, uMnu Mpemelelo Mnguni; uMhleli osemkantshubomvu wephephandaba iFinancial Mail, uMnu Songezo Zibi kanye nowayengumphathi womkhandlu omele abafundi uMnu Thembani Khumalo.
Izingxoxo bezinomdlandla nabafundi abaningi bekhombisa ukuwesekela lomthetho.
Kukhulunywe ngokuthi emazweni angasikhulumi isiNgisi kakhulukazi lawa ase Europe bayaqhubeka nokugcina ulwimi labo okubanga ukuthi ukusetshenziswa kwesiNgisi kungabaluleki kakhulu. Izwe laseJalimani lingelinye lamazwe aphoqa abafundi abavakeshela amanyuvesi ukuba basifunde isiJalimani.
Ezinye zezihambeli zithe kubonakala sengathi isiZulu sithola ukunakwa okukhulu uma kuqhathaniswa nezinye zezilimi zaseNingizimu Afrika. Kodwa uSolwazi Hlongwa uthe kunohlelo lokufaka ulimi lwesiSotho eNyuvesi ngesikhathi esizayo. Uphinde wathi iNyuvesi inomgomo wokuthuthukisa isiZulu njengoba kuhleliwe emthethweni wezilimi waseNyuvesi nowesifundazwe.
Izikhulumi zikugcizelelile ukuthi lokhu kufanele kubonwe njengendlela ebalulekile uma kuza ezinhlelweni zezinguquko, ukwakha isizwe nokugcinwa nokuthuthukiswa kwamasiko aseNingizimu Afrika.
Uma abafundi bezijwayeza ngezilimi zezwe bazoba sethubeni elingcono kwenze nomsebenzi wabo wamukeleke, ukhulume ngento ekhona kanti uvumeleke nasemphakathini ezindaweni lapho isiNgisi singasetshenziswa njalo.
UKhumalo uveze ukuthi abahlengikazi ibona abajika babe otolika uma iziguli zikhuluma nodokotela abakhuluma isiNgisi ezindaweni ezisemaphandleni. Lena uthe akusiyo indlela elungile ngoba kungagcina umyalezo ulahleke endleleni lokho kungehlisa indlela odokotela ababhekelela ngayo iziguli.
Izikhulumi zivumelene ukuthi lengxoxo ihambe kahle kahulu. Kuvunyelwene ukuthi kufanele kuqhutshekwe nokuphakamiswa nokulwela kwezilimi zomdabu eNingizimu Afrika yentando yeningi nokuthi wonke umuntu kufanele bakwenze lokhu ngaphandle kokuzinyeza nokuzibukela phansi.